महानिर्देशक बन्न सुर्के थैली दौड | Tungoon
महानिर्देशक बन्न सुर्के थैली दौड
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिले पशु सेवा विभागको महानिर्देशक, दुग्ध विकास संस्थानको महानिर्देशक तथा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशक फेर्ने तयारी गर्दैछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले ती तीनवटै कार्यालयका प्रमुखका रुपमा रहेका महानिर्देशक तथा महाप्रवन्धक फेर्ने तयारी गरिरहेको स्रँेत बताउछ ।
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रवन्धक गंगाप्रसाद तिमल्सेना अवकाश भएको करीब आठ महिना वितिसक्दा पनि अझै मन्त्री खनालले महाप्रवन्धक नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थानमा धुलो दूध खरिद काण्डमा मुछिएका ईश्वरी न्यौपानेलाई निमित्त प्रमुखका रुपमा लामो समयदेखि राखिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप खेप्दै आएका न्यौपाने विराटनगर आयोजनामा हुँदा होस् या बालाजु आयोजना प्रमुख हुँदा पनि विवादमा पर्दै आएका थिए । अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिवलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ लुट्न ब्यस्त रहेको आरोप न्यौपानेमाथि लागेको छ । यिनै न्यौपाने महानिर्देशक बन्न दौडमा लागिरहेको कृषि स्रँेत बताउछ ।
त्यस्तै पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मललाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ । केही साता अघिदेखि चलेको सो प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । पशु सेवा विभागको महानिर्देशक बन्ने दौडमा तीन प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश नं. २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा बंशी शर्मा मोटो सुर्के थैली बोकेर अहिले स्वकीय सचिव सरोज खनालसमक्ष त केहिले निजी सचिव अर्जुन भण्डारीलाई भेट्न दौडिरहेको चर्चा मन्त्रालयमा चल्ने गरेको छ ।
स्रँेतका अनुसार, प्रदेश सचिव बंशी हप्तै पिच्चे मन्त्रालय आउने गरेका छन् । उनी प्रदेश सचिवभन्दा महानिर्देशक बनाईदिन भन्दै पुरै लविङ्गमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रदेश नं २ को कृषि विकास मन्त्रालयले अनुदानमा दिएको शीत भण्डार निर्माणका ठेकेदारमार्फत २० लाखको सुर्के थैली भेटी चढाउने प्रतिवद्धता जनाएको चर्चा पनि मन्त्रालयमा छ ।
साँघुका अनुसार यस अघिपनि पशु सेवा विभागको महानिर्देशक बन्नका लागि दुईथान पत्रकार बोकेर नक्सालको सेकुवा कर्नरमा मन्त्रालयका केही विचौलियाहरूसँग बसेकोे स्रोत बताउछ । विवादित रहेका डा बंशी शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन नहुने लविङ्ग भएपछि त्यसबेला डा. विमलकुमार निर्मललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो ।
अहिले फेरि प्रदेश सचिव भईसकेर पनि महानिर्देशक बन्ने दौडमा वंशी शर्मा लागेका छन् । शर्मा नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । तर अहिल आफूलाई नेकपा निकट भएको भन्दै महानिर्देशक जसरी पनि बनाईदिन आग्रह गर्दै मन्त्री चक्रपाणिको क्वाटरसम्म धाउन थालेको स्रोत बताउछ ।
अहिले पशु सेवा विभागको महानिर्देशक बन्न लागि उपमहानिर्देशक डा सम्झना काफ्ले, महेश विष्ट, किसनलाल भट्ट पनि लागिपरेको चर्चा छ ।
Previousदश अर्बको सरकारी जग्गा मिलापत्र गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुन्छ त प्रधान न्यायाधीशज्यू ?
Nextसामुदायिक विद्यायलप्रतिको आकर्षण घट्दो